EL Iiglasi zelanga
Isinxibo se-LED kunye nezixhobo
Iminqwazi ye-LED kunye ne-Headwear
IiFavori zeQela le-LED
Imidlalo yemveli yeHalloween ibandakanya ukuzenza iziporho, ukuluma ama-apile kunye nokwenza izibane zamathanga?
1. Zenze ngathi usisiporho: IHalloween ngumnyhadala wesiporho eNtshona. Le yimini apho imimoya ifika kwaye ihambe. Abantu bafuna ukuboyikisa okweziporho. Ngoko ngolu suku, abantu abaninzi baya kunxiba iimpahla ezingaqhelekanga, bazenze iziporho, baze babhadule ezitratweni. Ngoko ke, abantu abaneentloni kufuneka...
Yintoni endiyidingayo ukuze ndilungiselele iHalloween?
1. Lungiselela i-candy NgeHalloween, unokuhlanganisana kunye emini nasebusuku, okanye ungaya kwindlu yomhlobo ukuba ucele iilekese. Kukho intetho ethi "iqhinga okanye ukuphatha" iyothusa iHalloween. Ngoko ke iilekese kufuneka-ube nanamhlanje. 2. Lungiselela isinxibo somlingo Isinxibo somlingo ...
Yintoni i-jack-o-lantern, kwaye yintoni isizathu se-jack-o-lantern? Inkcubeko yomnyhadala?
IHalloween uEva yasuka kwimibhiyozo enxulumene neziporho ezingendawo, ngoko ke amagqwirha, iziporho, iigoblins kunye namathambo kwimicinga yomtshayelo zonke ziimpawu zeHalloween. Amalulwane, izikhova kunye nezinye izilwanyana zasebusuku nazo ziimpawu eziqhelekileyo zeHalloween. Ekuqaleni, ezi zilwanyana zaziva zoyikeka kakhulu kuba kwakucingelwa ukuba...
Yintoni yokudlala kwiHalloween? Ezona zinto zidumileyo zomoya weHalloween zilapha!
1. Iimaski ezikhanyayo, njengenye yezinto ezihlekisayo ezibalulekileyo zeHalloween, bezisoloko ziyimithi ehlala iluhlaza kwiimveliso zeHalloween. Ukusukela kwezona maski zilula ziqhelekileyo ukuya kwiimaski ezinemibala eqaqambileyo ngoku, ukusuka kubalinganiswa ukuya kubume bobuso ukuya kubalinganiswa bentloko yezilwanyana,...
Idilesi yeHolo yoMboniso: 14 /F,Yongtong building.Renmin North Road,Luohu District, Shenzhen
ISHENZHEN NOVIT ELECTRC
Isiseko semveliso: 200-1, shilianxin Road, WulianZhugu,Isithili saseLonggang, eShenzhen
Umnxeba wokuBonwa: 86-755-82374286
Idilesi: Umgangatho we-14, iBloko A, iSakhiwo saseYongtong, 3146 iRenmin North Road
© Copyright - 2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. Iimveliso ezishushu - Imephu yesiza
Led Glove, Iglowusi, I-Led Stick, Led Spinner, I-Led Tumbler, Ikrele Elikhanyayo,